ကိုယ့်အကြောင်းနှင့်ကိုယ် – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in စိတ်ထဲရှိသမျှ and tagged co-operative, individualism, Life, World of Conflict. Bookmark the permalink.
← ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. မင်းသဘောပါ.. ဘာမဆိုပေါ့
Mp3Raid music code- Testing →
6 thoughts on “ကိုယ့်အကြောင်းနှင့်ကိုယ်”
MrDBA | May 12, 2009 at 12:13 pm
ကိုယ့်သမိုင်းကို သူများရေးအောင် ကြိုးစားရမယ်ကွယ့် ယူရေးနပ်စေတန်ရဲ့ …
ကုမ်ရာသီသူ | May 12, 2009 at 12:58 pm
ဟုတ်၊ ကိုကြီးဒီဘီ။ `ဓါးတောင်း၍ မိမိလည်ပင်းဖြတ်မည်´ပေ့ါ။ 😀 အဲလိုမျိုးသမိုင်းတော့ ကျွမ်းစ် ကျွမ်းတား ကျွမ်းတက်စ်။
ကိုသာသာ | May 12, 2009 at 1:15 pm
MrDBA ပြောတာကို တစ်ဝက်အနေနဲ့လက်ခံပါတယ်။
ကိုယ့်သမိုင်း သူများမရေးလဲ ကိုယ့်ဟာကိုရေးရမယ်
ကုမ်ရာသီသူ | May 13, 2009 at 9:29 am
ဟုတ်ကဲ့ ကိုသာသာ။ ဖြစ်ပုံက ကိုယ့်သမိုင်းကိုယ် ရေးနေတုန်း သူများသမိုင်းမှာလည်း ကိုယ်ရဲ့ ပုံရိပ်ပေါ်တတ်တာမျိုးကို တွေးမိလို့ပါခင်ဗျ။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း သမိုင်းတွေ ရောတတ်တာမျိုးပေါ့။ (ကျွန်တော်တော့ ကျောင်းတုန်းက အမှတ်အနည်းဆုံးက သမိုင်းပဲ 😦 ညံ့ချက်)
သမီးပျို | May 15, 2009 at 10:59 pm
ကုမ်ရာသီသူ | May 16, 2009 at 10:27 am
ဒါပေါ့။ သမီးပျိုရဲ့။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ သူ့လမ်းသူသွား၊ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားတွေ ဖြစ်ကုန်ရော။ ကျော်ဟိန်းရဲ့ လောကအခန်းပေါ့။ 🙂